आईपीएल भारतमा करोडौंको बाजी नेपालमा,कसरी लगाइन्छ बाजी ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
आईपीएल भारतमा करोडौंको बाजी नेपालमा,कसरी लगाइन्छ बाजी ?
वीरगन्ज । भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिता चलिरहँदा वीरगन्जमा त्यसैका नाममा करोडौँको जुवा चलिरहेको छ। आईपीएलका हरेक खेलमा हारजितका लागि अवैध जुवा खुलेआम चलाइएको हो।
पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता लिम्बूले वीरगन्जमा अहिले चलिरहेको सट्टाबाजी धन्दाबारेमा अनभिज्ञता जनाए पनि सन् २०१५ को आइपिएल चलेका बेला २०७२ वैशाख २४ गते वीरगन्जकै आदर्शनगरबाट प्रहरीले सट्टाबाजी धन्दा चलाएका गिरोहका पाँच जनालाई ठूलो रकमसहित पक्राउ गरेको थियो। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीले लिग कप (कार्वाओ कप) फुटबलको उपाधि […]
पाकिस्तानले साफ महिला फुटबल नखेल्ने,खेल तालिका परिवर्तन
काठमाडौं । यही फागुन २८ देखि आगामी चैत ८ गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुने पाँचौँ संस्करणको महिला साफ […]